Sababta Ay Kooxda Borussia Dortmund U Doonayso In Ay 130 Milyan Oo Euro Ugu iibiso Ousmane Dembélé Oo La Ogaaday Qorshe Kale Ayaa Meesha Ku Jira – Kooxda.com
Home 2017 August Ingiriiska, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta Sababta Ay Kooxda Borussia Dortmund U Doonayso In Ay 130 Milyan Oo Euro Ugu iibiso Ousmane Dembélé Oo La Ogaaday Qorshe Kale Ayaa Meesha Ku Jira
Sababta Ay Kooxda Borussia Dortmund U Doonayso In Ay 130 Milyan Oo Euro Ugu iibiso Ousmane Dembélé Oo La Ogaaday Qorshe Kale Ayaa Meesha Ku Jira
August 9, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Borussia Dortmund ayaa dhigeeda Barcelona ka dalbatay lacag dhan 130 milyan oo euro hadii ay doonayaan xiddiga weerarka uga ee Ousmane Dembélé inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Wargayska Mundo Deportivo ayaa sheegay in sababta ay Borussia Dortmund u dalbatay lacagta waalida ah ay tahay in heshiiskii uu xiddigan ugu soo biiray kooxda Borussia Dortmund ugana soo biiray kooxda reer France Rennes uu ku jiray heshiis kooxda reer France siinaya lacag dhan 25% qiimaha uu xiddigan ugu biirayo koox kale.
Taas ayaa la macno ah in hadii ay Barcelona Dembélé kula wareegto lacag dhan 100 Milya ay kooxda reer France heli doonto lacag dhan 25 Milyan oo euro.
Sidaa darteed hadii ay Dortmund doonayso in ay hesho lacag dhan 100 Milyan oo buuxa waa in ay xiddigan ku iibiso 130 Milyan oo euro.
Kooxda Barcelona oo wadahadalo kula jirta kooxda Borussia Dortmund ayaa ku rajo weyn in ay heshiis Rasmi ah la gaarto maalmaha soo socda si ay heshiiska xiddigan u soo xirto inta ayna koox kale soo galin tartanka.
Filed in: Ingiriiska, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta